China KN95 GB2626-2006,GB2626-2019 fekitari nevagadziri | Gubang
Basa uye Kushandisa
Iyo KN95 mask ine kusefa inoshanda inopfuura 95% yezvimedu zvine aerodynamic dhayamita ye0.075µm±0.02µm. Iyo aerodynamic dhayamita yehutachiona hwemhepo uye fungal spores inonyanya kusiyana pakati pe0.7-10 µm, iri zvakare mukati mekudzivirira kweN95 masks. Naizvozvo, iyo N95 mask inogona kushandiswa kudzivirira kufema kwechimwe chinhu, senge guruva rinogadzirwa panguva yekukuya, kuchenesa uye kugadzira zvicherwa, hupfu uye zvimwe zvinhu. Inokodzera zvakare mvura kana isina mafuta isiri-oiri inogadzirwa nekupfapfaidza. Particulate nyaya inokuvadza volatile gasi. Inogona kusefa uye kuchenesa kunhuhwirira kwakafemerwa (kunze kwemagasi ane muchetura), kubatsira kudzikisira ratidziro yezvimwe zvisingafekirwe tupukanana tudiki (senge mold, anthracis, tuberculosis, nezvimwewo), asi haigone kubvisa hutachiona hwekusangana, hurwere kana njodzi dzerufu.
Mhando dze: KN95 mask Kune vanhu: Vashandi vezvokurapa kana vashandi vanoenderana
mwero: GB2626-2006, GB2626-2019 KN95 Sefa level: 99%
Nzvimbo yekugadzira: Hebei Province Brand:
muenzaniso: Cup style Mhando ye disinfection:
saizi: Quality Certification: Ita
Sherufu hupenyu: 3 years Zviridzwa classification: Level 2
kuchengetedza mwero: zita rechigadzirwa: KN95 mask
port: Shanghai Port nzira yekubhadhara: Tsamba yekukwereta kana kutumira waya
Isa mask yakafuratira, dhonza maoko ako uye woisundira kuchiso chako, nezambuko refu remhuno pamusoro; pfungwa dzinokosha: vhara mhino, muromo uye chirebvu, isa bhanhire repamusoro remaski pamusoro pemusoro, bhanhire rezasi kumashure kwemutsipa, uye isa matipi eminwe yako Pamhino clip, edza kuita. mupendero wemasikisi unokodzera chiso.
Kana zvinotevera zvikaitika, mask inofanira kutsiviwa nenguva:
1. Kana iyo impedance yekufema inowedzera zvakanyanya;
2. Kana mask yakaputsika kana kukuvara;
3. Kana mask uye chiso hachikwanisi kunyatsobatanidzwa;
4. Iyo mask yakasvibiswa (yakadai seropa kana madonhwe uye zvimwe zvinhu zvekunze);
5. Iyo mask yakasvibiswa (inoshandiswa mumawadhi ega ega kana kusangana nevarwere);
Zvakapfuura: KN95 GB2626-2006,GB2626-2019 (NeExhalation Valve)
Zvinotevera: KS-9008 Standard CE FFP2 NR (Ine Exhalation Valve)